James Ellroy Yakavanzika. Musangano wakasarudzika naye muMadrid | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori, Mabhuku, Novela, Nhema nhema
Mifananidzo yose iri muchinyorwa chino na (c) Mariola DCA. Fnac Callao. Madrid. Nyamavhuvhu 20, 2019.
Zvinogara kwandiri hangover yezvinyorwa. Kwete zuva rega rega iwe unosangana neumwe weakakura pakati pemakuru, kwete chete yenyaya yematsotsi, asi yenyika yanhasi. Y James ellroy Izvo hazvina chete kundipa yakawanda nguva yekuverenga kwakanyanya uye kunonakidza, asi zvakare hushamwari hwakanaka uye yakawanda pesvedzero pane yangu yekunyora maitiro uye kudzidza. NeChishanu chapfuura iyo yechi20 aive muMadrid, kutanga kumira kwake european kushanya achiratidza chinyorwa chake chazvino, Dutu iri, zita rechipiri mushure Perfidy zvake Yechipiri trilogy yeLos Angeles Quartet.
Ichi ndicho chisingaperi yezvatiri kurarama vashoma vane rombo kuverengera vakapinda a kusangana kwakasarudzika neakakura (munzira dzese) munyori weLos Angeles. Izvo isu zvatakabvunza, iye akapindura, akataura uye akahukura mumutsara wake wenguva dzose we histrionics, yakamira pose, izwi rine mafuta uye netarenda risingaenzaniswi kuverenga iyo kusviba maonero e la Nhoroondo yeAmerica yepakati pezana ramakumi maviri remakore.
1 Histrionic nedudziro (asi kwete zvakanyanya)
2 Mibvunzo nemhinduro
2.1 Kugadzirwa kwemanovel
2.1.2 Maitiro semunyori
2.1.3 Mutauro uye maitiro
2.2 Kuremekedza kwako basa chairo remapurisa
2.3 Nezve dutu iri
2.4 Mafirimu uye maTV akateedzana aunofarira
2.5 Vabatsiri iwe vaunoda: zvekare uye venguva
2.6 Kwete-ngano mabasa
2.7 Dombo, vanakomana naBob Dylan
2.8 Bud White, Russell Crowe naSterling Hayden
2.9 Relaxed uye inosvikika chaizvo
Histrionic nedudziro (asi kwete zvakanyanya)
Zvatove zvinhu zvakasiyana siyana vakazvipira pano Dhiabhorosi Imbwa uye ake enganonyorwa, senge izvi, izvi o izvi. Saka Ini ndinosvika padanho yemusangano neChishanu chapfuura masikati apo vamwe vevaverengi vake vakakwanisa kumubvunza uye taura naye nezvese zvinhu zvataida. Zvakanaka, hazvina kufanana.
Saka ku geek kupfuura geek chinja (ndoda mhondi, sekudanwa kwayakaitwa naEllroy) iyo inogara ichioneka mune idzi kesi vakamumisa mamoderari apo kuyambuka mutsetse ine dingindira re chitendero. Uye akatora blunt buda kubva pano ine inosanganisirwa kurira kubva kumunyori. Asi izvo zvaive zvatove apo vashandi vaive varegedza uye isu tanga taona zvisirizvo zvisaririra zvemunhu.
James Ellroy (Los Angeles, 1948) ari hunhu iye. Nesimba rake rinotyisa, rinotyisa uye rakanyatso kufundwa histrionics, kunze kwebhokisi Akange aburitsa pachena kuti akapfuura kubva pakupindura nezvematongerwo enyika kubva ikozvino kana pamberi, racism o chitendero pakati pechimwe chinhu. Was there to taura nezvemabhuku avo uye ita kuti munhu wese averengeKuti ivo vanosiya mabasa, hupenyu, vana, mukadzi, murume, vadikani, chero chii, kuti vatange kuvaverenga. Zvichingoenda zvakadaro kuwana mari yekurarama hupenyu hwepamusoro, vane mota dzoumbozha, vakadzi, chikafu chakanaka uye kunwa kwakanaka. Kunyangwe iwe ukangonwa mvura izvozvi, haufanire kubvisa yapfuura izere nedoro uye zvinodhaka.
Nguva yakareba yekutaura yakatipfuura tichigomera, ne mhepo mvura nenzvimbo akasununguka, divertido uye kuomarara. Uye kunyara uye kutya kwakatisiya, pakati pezvimwe zvinhu nekuti isu tatoziva ngano yeavo vanofungidzirwa nzira dzakaipa. Icho chakanyanya kuve pamberi peicho chaicho.
Uye pasina kumwe kunonoka, nerubatsiro rwe muturikiri, tinoenderera kumberi kumibvunzo yataida kukubvunza iwe, seiyi:
Izvo zvinoderedza kutsvaga nguva dzose sunga muverengi nemusoro wenyaya unogona kubata chinyararire chake, chinotyisa kana chekufarira nerutivi rwakasviba renhoroondo uye hunhu hwevanhu. Saka mhirizhonga, tabloid utapi venhau, mhosva, kuferefetwa kwemapurisa, kwepasirese manzwiro uye hunhu hwerudo, chishuwo, hasha, kutya ndidzo injini dzine simba kwazvo dzinogovaniswa nharaunda dzese. Uye izvozvo zvinotengesa. Kunyangwe haasi kuedza zvachose kuseka nhoroondo yechinyakare.
Uye iyo dudziro yaakapa muchimiro chemusoro wenyaya yaive iyi: «Iwo makuru enganonyorwa ndemhedzisiro yepfungwa imwechete, moyo mumwe uye mweya mumwe chete », uye ivo havana kana enzaniso semuenzaniso zvinyorwa zvemamuvhi kana zveterevhizheni. Ndokusaka gare gare, paakabvunzwa kana akafunga kuti panogona kuvepo Nhau dzakanaka dzakanyorwa nevanyori vanopfuura mumwe, akapindura izvozvo kwete.
Zvinyorwa zvemazana anopfuura zana mapeji ekuronga inoverengeka iyo yakazotevera nyora neruokosezvo ichipfuura makomputa. Makofi maviri ikozvino nyora, nyorazve uye nyora zvimwe kusvika zvapera uye mubatsiri wega anozvikanda mukombuta faira.
Mutauro uye maitiro
Kana paine chimwe chinhu chinoratidza Ellroy, kunze kwemazano ake akareba uye akaomarara, ndiwo maitiro. dzimwe nguva telegraphic uye inogara iri incisive, kucheka, hyper-condense uye truncated. Nehuwandu hwe zvinyorwa o Ellipse uye nezvimwe zvivakwa zvine hunyanzvi. Akataura kuti luye anoda mutauro weChirungu uye kunyanya chiAmerican Chirungu izvo, panguva imwechete, zvine pesvedzero dzakawanda kwazvo nemisanganiswa yevamwe.
Kuremekedza kwako basa chairo remapurisa
Pamusoro payo ndeye anodisisa kuferefetwa nemapurisa pamwe chete navo zvipfupiake jargon kana nzira yake yekunyora mishumo izvo zvakanyanya kududzira mune yavo nyaya. Uye kumubvunzo we nei kune mavara mazhinji, kazhinji mapurisa, vanoshungurudza doro kana zvinodhaka, akapindura kuti pane vaanoziva iye ega chetatu zvacho zvidhakwa. Asi ine kuremekedza kwakazara basa ravanowanzoita. Hongu zvirokwazvo, avo avo ku anoda kugadzira vangangoita nguva dzose zvakaipisisa weboka.
About Wiki Dutu iri
Zvirinani kuverenga Perfidy kare, akakurudzira paakabvunzwa kana iwe uchigona kuverenga iyi nyowani nyowani yakazvimiririra. A) Hongu mavara anozivikanwa izvo zvakatoonekwa mune yekutanga LA Quartet (Dudley Smith, Buzz Meeks, Sid Hudgens, nezvimwewo) uye kuti mune ino yechipiri trilogy ivo mudiki uye anovadzosera kumakore eWWII.
Mafirimu uye maTV akateedzana aunofarira
Tsvimbo yemafuta ye The waya, iyo terevhizheni, iyo yaaisatombofarira zvachose. Zvakanyorwa zvakashata uye zvinotsausa, akataura zvakajeka. Zvisinei, akataura zvinoshamisa Kuuraya, pamaonero nemaitiro ekurondedzera maNordics.
Iye haana kuzvifarirawo muzuva rayo firimu inoenderana iyo yakasaina brian palm about Iyo nhema dahlia, zvatakabvumirana tese. Uye, kunyangwe iye asingade Quentin Tarantino futi, Ehe kunze Pane imwe nguva pane imwe hollywood, yemufananidzo wakabudirira zvekuti zvakaratidzika kwaari nezvenzvimbo iyo yaanoziva kwazvo.
Vabatsiri iwe vaunoda: zvekare uye venguva
Akataura izvozvo Don Winslow haisati yaverengwa, wavakakumbira, asi hongu Anofarira Don DeLillo uye iyo Libra. Kana zvekare zvekare Ross MacDonald (iye musiki wemutikitivha Lew archer), kunyange hazvo akaitumidza seyekunyepedzera uye yakanyanyisa kurimwa, uye James M. Kaini, (munyori we muposita Anogara achifona kaviri). Uye akataura pamusoro pezvose Dashiell nyundo Chemhondoro mutsigiri werudzi rwemarudzi.
Izvo zvauri kuronga kutsikisa. Vamwe zvinyorwa about mishumo chaiye umhondi uye nezve mutambi Mineo Munyu uye mamiriro ekufa kwake, iyo inosanganisirawo a pfupi pfupi. "Ndiko kuchave kuonekana kwangu nevatori venhau," akadaro.
Dombo, vanakomana naBob Dylan
Mibvunzo yakanyanya anecdotal dzaiva idzo dza sei asingade dombo kana asina kuita vana. Kune wekutanga, akanyatso pindura kuti ndizvo rock is "shit" uyezve, nekunyomba kukuru, kuti iwe unofanirwa kuve vanhu vehurongwa, pfeka saiye, nezvimwe.
Kune vana, vakagara vaine mari yakawanda yekushandisa muhupenyu hwakanaka. Uye kune chii che wafungei kuti vangadai vakamupa iyo Nobel a Dylan akataurawo izvozvo "Enda shit" uye chii icho akafanirwa nazvo zvakanyanya Firipi Rothsemuenzaniso, ngaazorore murunyararo, kana iyo.
Bud White, Russell Crowe naSterling Hayden
Ndinopedzisira ne hurukuro yangu chaiyo hafu yakazungunuka naEllroy. Nekuti Ndakangoshinga chete ndinokupa zvangu kuzvipira kwazvo Ndatenda nehunhu hwangu hutatu zvido zvehukuru hombe gallery ine: Pete bondurant, ivo America y Matanhatu ema greatsuye Dudley smith y Bud chena de LA Chakavanzika.
Pakarepo akaita angled maziso angu Uye akandiudza kuti zvechokwadi, ini ndanga ndichitaura nezve iyo bhaisikopo, handiti? Ndakazvibvuma ndikabva ndataura izvozvo nekutenda kwaari ndanga ndakabatirirwa pamanoveli ake uye zvakavadya zvese. Ah zvakanaka ipapo mukuru Akapindura. Uye hongu, kare, ku Bud Chena akaita Russell Crowe, kunyangwe dai zvaigoneka, sarudzo yangu yekududzira ingadai iri Sterling hayden".
Uye ini ndatova padhuze nekufenda kubva pakumunzwa achitaura mumwe wevandaiyemura vatambi vekare. "Munhu, zveshuwa," ndakaratidza, "ndeyekuti dai iyo bhaisikopo yainge yagadzirwa muma50s, Hayden ingadai yakave yakanaka». Zvisinei, ini ndanga ndisina mhinduro iri nani.
Relaxed uye inosvikika chaizvo
Izvo zvinoratidza kuti zvimiro ndizvo zvinoita. Nekuti mumasiginecha nekwaziso Ellroy haigone kuve padhuze, hushamwari, hushamwari uye mune yakanaka mamiriro.
Akataura uye akabvunza nemunhu wese mumifananidzo nemavhidhiyo, Aifarira zvakataurwa kwaari, akazunza maoko ese ndokutaura mashoma mazwi paakatisaina. Akanditumira kumba, kwaipisa kwazvo ikoko, akadaro, nepo ini ndaingogona kungotaura nekutenda nekutenda zvakanyanya nemabhuku ako. Saka ndinopedza neizvi vhidhiyo pfupi yekutaura kwake uye nguva iyoyo nevaverengi.
Verenga Ellroy izvozvi. Grrrrr ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » James Ellroy Yakavanzika. Musangano wakasarudzika naye muMadrid
Iyo chaiyo mermaid